Shirka Soomaaliya eela Qabanayo Bisha Maajo 2013 - GOV.UK
Ammaanka soo wanaagsanaadey ee ay dhaliyeen ciidamada ammaanka qaranka ee Soomaaliya oo uu taageerayo Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) daraaddii, ayaa waxaa ka dhashey in dadku ay dib u dhisanayaan hantidooda iyo ganacsiyadooda. Kalsoonida ayaa sii kordheysa, waxaana soo noqonaya qurba-joogtii. Waa muhiim in waqtigan aan uga faa’iideysanno sii joogteynta xawaarahan oo aan ku abuurno xaaladihii soo-nooleyn lahaa si ay u bulaasho ruuxiyadda ganacsi-abuurnimada ee ku jirta Soomaaliya.
Dowladda cusub ayaa soo saartey qorshe siyaasadeed oo lix tiir ka kooban oo ay ku caddeysey in ay xoogga saareyso ammaanka iyo caddaaladda, yareynta musuq-maasuqa, dardargelinta soo-kabashada dhaqaalaha, bixinta adeegyada caafimaad iyo waxbarashada, dhiirrigelinta iskaashiga wada-hawlgalayaasha caalamiga ah, iyo ilaalinta midnimada iyo wadajirka Soomaaliya. Ururka Islaamiga ah ee xagjirka ah ee Al shabaab ayaa laga saarey QAAR ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Dadku waxaa ay dib-u-dhisayaan hantidooda iyo ganacsiyadooda. Kalsoonida ayaa sii kordheysa, waa dib-u-soo-noqonaya Qurbajoogtii. Waxaa muhiim ah in aan waqtigan aan uga faa’iideysanno sii joogteynta xawaarahan oo aan ku abuurno xaaladihii soo-nooleyn lahaa si ay u bulaasho ruuxiyaddii ganacsi-abuurnimada ee ku jirta Soomaaliya.
Soomaaliya waxaa sidoo kale ay ka muuqan doontaa munaasabado kale oo heer sare ah oo ay martigelin doonaan wada-hawlgalayaal caalmi ah iyo hay’ado caalami ah, oo ay ka mid yihiin Qaramada Midoobey, Midowga Yurub, Japan iyo Midowga Afrika, waxaana sidoo kale diiradda ay u saaran tahay dalalka G8 oo ay dowladda UK guddoomineyso sanadkan.
SomaliPM - Official Twitter account of the Somali Prime Minister Abdi Farah Shirdon/Barta Rasmiga ah ee Twitter-ka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya
#Somalia2013 – follow the hashtag we are using for the conference/raac calaamadda ‘hashtag ee aan u isticmaaleyno shirka